Huawei P20 Lite: အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ဒီဇိုင်းပေါက်ကြား | Androidsis
Huawei သည်ဤ MWC 2018 တွင်စမတ်ဖုန်းလောကတွင်မရှိခြင်းကိုသတိပြုမိသည့်အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံကောင်းတာကဒီလအကုန်ပိုင်းမှာတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဟာသူ့ရဲ့ high-end range အသစ်ကိုတရားဝင်တင်ဆက်မှာပါ။ ၎င်းသည်ဖုန်းအသစ်သုံးလုံးဖြစ်ပြီး P20 က ဦး ဆောင်နေသည်။ ရင်တောင်မှ Huawei P20 Lite ကိုလည်းထုတ်လုပ်မည်။ အချက်အလက်များစွာသည်ဤဖုန်းမှပေါက်ကြားထားပြီးဖြစ်သည်။
အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ Huawei P20 Lite ရရှိနိုင်မည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်စျေးနှုန်းတို့ကိုသိရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏စမတ်ဖုန်းအသစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အံ့သြစရာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ကျွန်တော်ဘာကိုမျှော်လင့်နိုင်မလဲ?
၎င်းသည်မည်သည့်အချက်အလက်မျှမသိသေးသောဖုန်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာဖြစ်ရပ်တူဖြစ်ရပ်မှာတင်ဆက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပေမယ့်အခြားအနည်းငယ်သာရိုးရှင်းစွာလူသိများခဲ့သည် နောက်ဆုံးတော့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်ကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။ ပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဒီဇိုင်းနဲ့ကြည့်ရင် P20 နဲ့တော်တော်တူတယ်။
Huawei P20 Lite ၏အနောက်ဘက်တွင် 16 MP ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်လက်ဗွေဆင်ဆာကိုတွေ့ရသည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန် P20 နဲ့မတူတာကဒီဖုန်းမှာကျောဘက်မှာအာရုံခံကိရိယာရှိလိမ့်မယ်။ ကင်မရာ၊ အာရုံခံကိရိယာနှင့် ၄ င်းတို့၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်သိပ်မများပါ။
Huawei P20 Lite တွင်အောက်ပါအချက်များပါဝင်သည် 5,84: 18 အချိုးနှင့်အတူ9လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်။ သင်မြင်သောကြောင့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်စျေးကွက်တွင်အလွန်ဖက်ရှင်ကျသည့်ဘောင်များမရှိဘဲဘောင်များပေါ်တွင်ထပ်မံလောင်းနိုင်သည် resolution နှင့်စပ်လျဉ်း။ 1080 × 2250 ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် 18:9အချိုးအစားသည်ထစ်အပိုင်းကိုမရေတွက်ဟုထင်ရသည်။ အတွင်းပိုင်းက ၂.၃၈ GHz အမြန်နှုန်း quad cores ပါ ၀ င်သည့် Kirin 659 ပရိုဆက်ဆာနှင့် ၁.၇ GHz နှုန်းဖြင့်နောက်ထပ်လေးခု။4GB RAM နှင့် 64 GB Internal Memory ပါ ၀ င်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Android 8.0 Oreo ကိုစံအဖြစ်အသုံးပြုမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ ၃၂၅၀ mAh ဘက်ထရီရှိလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အခြားမော်ဒယ်လ် ၂ ခုထက်စွမ်းအင်ပိုနည်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စျေးနှုန်းကနည်းလိမ့်မယ် ဒါ့အပြင်ဒီစျေးနှုန်းဟာနက်နဲသောအရာမဟုတ်ပါ။ Vodafone ၏ကျေးဇူးတင်စကားမှကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်ပါပြီ။ Huawei P20 Lite ၏ဈေးနှုန်းသည်ယူရို ၃၂၉ ဖြစ်သည်။ ဒီကတည်းကအတည်ပြုခဲ့သည် Engadget.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ဒီဇိုင်းကို Huawei P20 Lite ကိုစစ်ထုတ်သည်
ယခုသင် Harry Potter: Hogwarts Mystery အတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်